I-Koh Tao Heights i-Luxury Pool Villa - I-Airbnb
I-Koh Tao Heights i-Luxury Pool Villa
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguKoh Tao Heights
Yonwabela ubunewunewu bethu obuyi-120 yeskwemitha yee-villas ezigcweleyo kunye namachibi azo angenasiphelo, kunye nemibono emangalisayo yepanorama yeSairee Bay kunye neKoh Nang Yuan. Yenzelwe ukuqinisekisa ukuba uphumla, amava asondeleyo.
I-Koh Tao Heights Pool Villas yi-120 sq. yemitha yendawo yokuhlala etofotofo, enoxolo kunye neyimfihlo, eyilwe ngokudityaniswa okunesitayile soyilo lwendabuko lwaseThai kunye nobuhle bale mihla. Ifakwe ngokupheleleyo ngegumbi lokuhlala elitofotofo, igumbi lokulala elikhulu, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, ichibi elimangalisayo labucala elingenasiphelo eligcwele iJacuzzi, i-sundeck kunye ne-gazebo, ejongene namanzi amahle e-turquoise e-Sairee Bay kunye ne-Koh Nang Yuan. Ifakwe kwithambeka lenduli kumbindi weSairee nje yimizuzu eli-10 yokuhamba ukusuka elunxwemeni, kufutshane ngokwaneleyo ukuba ilungele indawo zokutyela, iivenkile, iibhari zaselwandle kunye namatheko kodwa kude ngokwaneleyo ukuze ukwazi ukonwabela ukuzola okunoxolo kweyakho indlu yabucala.
Ifakwe kwimizuzu emi-2 ukusuka eSairee Beach okanye i-10 min uhamba ukusuka kwindawo yaseSairee, iindwendwe zinokuhamba ngokulula ukuya embindini wedolophu kunye nokuhamba okufutshane ukuya elunxwemeni.
Umbuki zindwendwe ngu- Koh Tao Heights
Uya kubonelelwa ngeselfowuni ecwangciswe kwangaphambili enamanani ayimfuneko. Ukuhanjiswa kokutya, iiteksi kunye nazo zonke iinkonzo zethu kukufowuna kuphela. I-Koh Tao Heights inebhongo ngokubonelela iindwendwe zayo ngenkonzo yobuqu ukusukela ngexesha lokubhukisha, kubandakanya noncedo lokuhamba, iteksi kunye nokurenta ibhayisekile. Ukulungelelanisa kunye nokulungelelanisa imisebenzi esiqithini efana nokuntywila, ukuntywila emanzini, ukukhenketha ngesikhephe, ukukhwela amatye, iiklasi zokupheka zaseThai nokunye. Sikwabonelela ngemisitho eyodwa efana nemihla yokuzalwa, isikhumbuzo kunye neehoneymoons, iikeyiki zomhla wokuzalwa ezenzelwe wena kunye naziphi na ezinye izicelo ezizodwa iindwendwe ezinokuba nazo. Konke oku, kumzamo wokwenza ukuhlala kwakho e-Koh Tao Heights pool villas ibe ngamava awodwa kwaye angenakulibaleka.
Uya kubonelelwa ngeselfowuni ecwangciswe kwangaphambili enamanani ayimfuneko. Ukuhanjiswa kokutya, iiteksi kunye nazo zonke iinkonzo zethu kukufowuna kuphela. I-Koh Tao Heights ine…
UKoh Tao Heights yi-Superhost